I-Casa MaiTai II, 2 Bdrs, ngaphesheya kolwandle lwase-StJean
Saint-Jean, Saint Barthélemy, i-Saint Barthélemy
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Villa Maï-Taï
U-Villa Maï-Taï uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ifakwe endaweni eluhlaza okotshani, i-Casa Mai Tai iyindlu yedolobha yase-creole, esanda kulungiswa. Umhlobiso uyingxube yezinto zakudala nezingcezu zesimanjemanje.
Indlu itholakala kahle enkabeni yesiqhingi futhi inendawo yokupaka yangasese, izinyathelo ezimbili ukusuka ebhishi laseSt Jean (Eden Rock, Nikki Beach, Gypsea) nezitolo ezinhle.
Le ndlu yohlobo lwe-duplex ilele endaweni yokuhlala ezolile, ibhlokhi ngemuva komgwaqo omkhulu.
Izitebhisi zokungena ziholela esitezi esiphansi: ikhishi elihlonyelwe kanye negumbi lokuhlala kune-air conditioner futhi ingahlukaniswa nezikhala zangaphandle. Le ndawo ivulelwa ithafa elithokomele, okuhlanganisa nendawo yokudlela evikelekile (eyabantu abangafika kwabayi-6) kanye nendawo yokuphumula engaphandle enezoso. Indawo yokuhlala iphinde inwebe ngaphansi kwevulandi elimboziwe okuhlanganisa nendawo yokufunda.
Igumbi lokuhlala lifakwe i-HD Samsung TV (eneNetflix noma i-Amazon TV) ne-inthanethi ye-Wifi.
Indlu yethu inamakamelo okulala amabili:
-Igumbi lokulala 1, igumbi lokugezela kanye nendlu yangasese ehlukile kusezingeni eliyinhloko. Leli gumbi linombhede ongangendlovukazi kanye nokubukwa kolwandle.
-I-Bedroom 2 itholakala phezulu, ibheke engadini futhi ifakwe umbhede olingana nenkosi (noma imibhede emi-2 yabantu abangabodwa, uma iceliwe). Igumbi lokugezela elixhumene elinegumbi lokugqoka livula ithafa elincane langasese, elilungele ukufunda ngokuthula noma ukubuka izinkanyezi.
Sikufisela ukuhlala okujabulisayo e-St Barts, ungangabazi ukusithinta uma unemibuzo mayelana nendlu, indawo noma izinto ongazenza esiqhingini.
I-St Jean iyisifunda esiphilayo nesinelungelo elikhulu enkabeni ye-St Barthelemy, imizuzu emi-5 ngemoto usuka esikhumulweni sezindiza.
Uzojabulela i-Pelican Beach emangalisayo ngesikhathi esingaphansi kwamaminithi angu-2 ukuhamba, ukuyothenga, izindawo zokudlela ezihlukahlukene nemigoqo kanye negrosa elihle. Ihhotela eliyisakhiwo sodumo i-Eden Rock 5* kanye nezindawo zokudlela ezidumile zase-Nikki Beach kanye ne-Gypsea beach nazo ziseduze.
Ibungazwe ngu-Villa Maï-Taï
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nomphathi wethu wendlu nganoma yimuphi umbuzo ngaphambi noma ngesikhathi sokuhlala kwakho